मोबाइल एक्स-रे कोभिड – १९ बिरामीहरूका लागि किन अत्यन्त मूल्यवान छ ? – Nepali Health
२०७७ जेठ १० गते १९:०१ मा प्रकाशित
अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को महामारीसँग जुधिरहेको छ । अनि यसरी जुध्न धेरैखालका चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ।
यस्तै चुनौतीमध्येको एक हो कोभिड- १९ ‘मोबाइल एक्स – रे’ । किनकी कोभिड- १९ बाट संक्रमित बिरामीको पहिचान गर्न यसले ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
SARS-CoV-2 संक्रमणको लागि CT को निदानात्मक मान व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ। यद्यपि आईसीयूमा गम्भीर बिरामीहरूमा सीटी प्रदर्शन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, जबकि मोबाइल एक्स-रेले विकल्पको रूपमा काम गर्दछ।
२० फेब्रुअरीदेखि मार्च २० सम्म ५४२ मोबाइल छातीको एक्स-रे 229 COVID-19 बिरामीहरूलाई सहयोगी भेन्टिलेसन अन्तर्गत गरिएको थियो। तालिका १. ले Cohort मुख्य विशेषताहरूको सारांश दिन्छ।
SARS-CoV-2 =severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2
कुल २२९मध्ये एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्निहित रोग १६५( ७२ प्रतिशत) मा अवस्थित छ । ३१ प्रतिशतमा उच्च रक्तचापर, १३ प्रतिशतमा पुरानो हृदयरोग, १२ प्रतिशतमा क्रोनिक पल्मोनरी रोग र ११ प्रतिशत मा Malignancy देखिएको थियो ।
३० मार्च सम्ममा कुल २२९ विरामीमध्ये ९५ जना ( ४१ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो । १३४ अर्थात ५९ प्रतिशत बाँचेका थिए । त्यीमध्ये ५८ जना डिस्चार्ज र ७६ जना अझै अस्पतालमा छन् ।
तालिका १ ले प्रत्येक बिरामीलाई प्रदर्शन गरिएको एक्स-रेको संख्या देखाउँदछ। त्यहाँ २२९ प्रारम्भिक परीक्षा थिए र ३१३ फलो-अप थिए । image गुणस्तर यी सबै एक्स-रेको लागि नैदानिक थियो।
सबै बिरामीहरूमा प्रारम्भिक एक्स-रेमा विस्तृत निमोनिया देखियो। अन्य खोजहरू न्यूमोथोरैक्स (7%) र Pleural effusion (23%) थिए। Subcutaneous emphysema, hiatal hernia, and intrapulmonary cavity दुर्लभ निष्कर्षहरू थिए (तालिका .१)।
निमोनोथोरक्सका सबै बिरामीहरू मरे। अघिल्लो एक्स-रेको तुलनामा, निमोनियाको बृद्धि 119(38%) पछिल्लो एक्स-रेमा देखियो, जबकि 57 (18%) मा परिवर्तन भएन, र 137 ( 44%) मा सुधार देखा पर्‍यो।
गैर-बचेकाहरू मध्ये (n = 95), 61 बिरामीहरूलाई फलो-अप एक्स-रे थिएन र प्रारम्भिक जाँच पछि 1-4 दिन पछि मरे; 34 बिरामीहरूको 55 फलो-अप एक्स-रे थिए। निमोनियाको प्रगति 53 (96%) देखी follow 55 फलो-अप एक्स-रे मध्ये देखियो जब अघिल्लो रेडियोग्राफको तुलनामा (चित्र १)।
प्रयोगशाला-प्रमाणित SARS-CoV-2 निमोनियाको साथ 57 बर्षे महिलालाई ज्वरो र झाडापखालाका लक्षणहरू देखा पर्ने एक हप्ता पछि Dyspnea भयो। उच्च-प्रवाह OXYGEN INHALATION अन्तर्गत, उनको पल्स Oxygen संतृप्ति (SPO2) मात्र 60% थियो; यस प्रकार, invasive ventilation SPO2 लाई 95% कायम राख्न प्रेरित oxygen 50-70% को अंशको साथ प्रयोग गरियो।
21 फेब्रुअरीमा, उनको पहिलो मोबाइल एक्स-रे भयो, जसले विस्तृत निमोनियालाई दर्शायो। प्रारम्भिक एक्स-रेसँग तुलना गर्दा, फेब्रुअरी 24 मा अनुसरण गरिएको एक्स-रेमा उल्लेखनीय प्रगति देख्न सकिन्छ, जुन सामान्य “सेतो फोक्सो” थियो।
एउटा नयाँ Pulmonary cavity दोस्रो एक्स-रेले पत्ता लगायो, र मार्च 1 को तेस्रो एक्स-रेमा उल्लेखनीय रूपमा ठूलो थियो। बिरामी अन्तिम एक्स-रे पछि चार दिन पछि Respiratory Failure को कारण कारण मृत्यु भयो ।
बचेकाहरू मध्ये (n = 134), 111 बिरामीहरूको 288 फलो-अप एक्स-रे थियो। Pneumonia Progress 66/288 रेडियोग्राफमा देखा पर्‍यो (26%) 37 बचेकाहरूमा एक्स-रे अनुवर्ती; यद्यपि सुधार पछि देखा पर्‍यो।
हामीले पत्ता लगायौं कि मोबाइल एक्स-रेले निमोनिया निदानको लागि पर्याप्त Image गुणवत्ता प्रदान गर्दछ, कम्तिमा गम्भीर बिरामीहरूको यो जनसंख्यामा।
स्पष्ट रूपमा सीटी भन्दा कम जानकारीमूलक भए पनि, एक्स-रेले pneumothorax or lung cavitation जस्ता गम्भीर जटिलताहरू पत्ता लगाउन सक्छ, र निमोनियाको विकासको अनुमान लगाउँदछ।
तसर्थ, यो गम्भीर बिरामी SARS-CoV-2 बिरामीहरुमा छोटो CT Scan पार गर्न नसक्नेमा एक सरल तर भरपर्दो विकल्प हो।
# हमाल नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी कर्णाली प्रदेशका संयोजक हुन् ।